Paddington 2(2017)မြန်မာစာတန်းထိုး – Gold Channel Movies
It takesabear to catchathiefNov. 09, 2017UK, France, USA103 Min.PG
ဘရောင်းမိသားစုနဲ့အတူ လန်ဒန်မှာ အခြေချနေထိုင်တဲ့ ၀က်ဝံလေးပက်ဒင်တန်ဟာ ဘာ လုပ်လုပ် အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်ပေမယ်လို့ လူတိုင်းကိုကူညီလို စိတ်ရှိတဲ့အတွက် ချစ်ခင်သူများပါ တယ်။ ဘရောင်းမိသားစုမှာလည်း အိုလံပစ်ယာဉ်မောင်းဖြစ်ဖို့ ကြိုး ပမ်းနေတဲ့ မေရီ၊ ရာထူးမတိုးသေး တဲ့ ဟင်နရီ၊ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက် တဲ့ ဂျူဒီ၊ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ဂျိုနသန်စတဲ့ အပြောင်းအလဲ များစွာနဲ့ပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ အန်တီ လူစီရဲ့ အသက်ရာပြည့်မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ဆင်မြူရယ်ဂရူဘာရဲ့ ရှေး ဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်က Pop Up စာအုပ်လေးဝယ်ပေးဖို့ စိတ်ကူး ထားတာကြောင့် ပက်ဒင်တန်ဟာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ရင်း ငွေစုခဲ့ပါ တယ်။ ပိုက်ဆံပြည့်တဲ့နေ့မှာ စာ အုပ်သွားဝယ်ရင်း သူဝယ်မယ့် စာအုပ်သူခိုးခိုးသွားတာ တွေ့ပေ မယ့်လို့ ပက်ဒင်တန်ဟာ စာအုပ် သူခိုးအဖြစ် မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရပြီး သက်သေမပြနိုင်တဲ့အတွက် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘရောင်းမိသားစုကလည်း ပက်ဒင်တန် မလုပ်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းရင်း ရှေ့ဖြစ်ဟောသူ တစ်​ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီး ပျောက်သွား တဲ့ Pop Up စာအုပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဆန်းကြယ်တဲ့ဖြစ်ရပ် ရှိတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ စာအုပ်ကို ဘရောင်းမိသားစု အိမ်နားမှာနေတဲ့ ဖီးနစ်ဘက်ချနန်ဆိုတဲ့ သူက ခိုးယူထားတာဖြစ်ပြီး ဟင်နရီနဲ့ မေရီက အဲဒီလူရဲ့ အိမ်ထဲခိုးဝင် ရှာဖွေကြတဲ့အခါ ပျောက်နေတဲ့ စာအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဘက်ချနန် အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက် ဘာသက်သေမှ မယူလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပက်ဒင်တန်ဟာလည်း ထောင်ထဲမှာဆုံတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ဘရောင်းမိသားစုနဲ့ ပြန် ချိတ်ဆက်မိခဲ့ပါတယ်။
Pop Up စာအုပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေလဲ။ ဘက်ချနန်ဟာ စာအုပ်သူခိုးအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဟျူဘွန်နဗီလ်၊ ဆယ်လီဟော့ကင်း၊ ဘရန်ဒန်ဂလီဆန်၊ ဂျူလီဝေါ်လ်တာ၊ ဂျင်မ်ဘရော့ဘန့်၊ ပီ တာကက်ပယ်ဒီ၊ ဟျူဂရန့် စသူတွေရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ ရယ်ရယ်မောမော ကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ …။
Review by7Daily Website
Encoded by Sai Naing Lin Tun(UCLA)
Quality 1080p Bluray
Running Time 1hr 44mins
Original titlePaddington 2
IMDb Rating8.0 19,828 votes
Download Openload (HD) 813MB3months
Download Openload (SD) 353MB3months
Download Mega (HD) 813MB3months
Download Mega (SD) 353MB3months
White Fang (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
S/o Satyamurthy (2015) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Iddarammayilatho (2013) မြန်မာစာတမ်းထိုး
I Feel Pretty (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The Cleanse (2016) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The Death of Superman (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Birdman (2014) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Coco (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Monster Island (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
A Doggone Adventure (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Spider-Man: Homecoming(2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Dreamers(2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Concubine 2012 မြန်မာစာတန်းထိုး
Karate Kill (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
White Lily (2016) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Driver (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး 18+
God of War (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sex Doll (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dragonheart: Battle for the Heartfire 2017 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
© 2018 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved. Powered by Doothemes